Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka oo dalalkooda ka masaafuriyay shaqaalaha Itoobiyaanka ah | warsanradio baydhabo
Home ARIMAHA BULSHADA	Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka oo dalalkooda ka masaafuriyay shaqaalaha Itoobiyaanka ah
Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka oo dalalkooda ka masaafuriyay shaqaalaha Itoobiyaanka ah
Kumanaan shaqaale Itoobiyaan ah oo bilaa sharci ah ayaa si lama filaan ah looga musaafuriyay dalka Isutaga Imaaraatka carabta iyo Sacuudi Carabiya iyaga oo dib loogu celiyay Addis Ababa usbuucii lasoo dhaafay.
Dowladaha labada dal ee Bariga Dhexe waxay sheegteen in Itoobiyaanku ay u nugul yihiin faafitaanka coronavirus ayna tarxiileen kadib markii ay ogaadeen in qeyb ka yihiin faafitaanka cudurka Covid19.
Toddobaadkan, wasiirka caafimaadka ee Itoobiya, Lia Tadesse waxay xaqiijisay masaafurintan, taasoo wiiqeysa dadaalka Ethiopia ee ku aaddan yareynta tirada kiisaska sii kordha ee COVID-19. Itoobiya, waxaa hadda ka jira 74 xaaladood. In kabadan oo ka mid ahna waa dad safar ku tegay Dubai.
Tadesse waxay tidhi “Shaqaalaha Itoobiyaanka ah ee ku sugan Saudi Arabia, UAE iyo Djibouti waxaa lagu qasbay inay dalkooda u cararaan, waana xaalad culays ku noqotay sidii loo xakamayn lahaa fayraska.”
In ka badan 2,870 muhaajiriin Itoobiyaan ah ayaa la masaafuriyey bishii hore iyada oo Itoobiyana ay rajaynayso in ay heli doonto 3,000 oo kale oo muwaadiniin ah 15ka maalmood ee soo socda oo keliya, sida ay sheegtay wasiirku.
Qaar badan oo ka mid ah dadka soo laabtay waa dumar iyo rag guryaha ka shaqeeya oo haysta shaqooyin hoose. Sanado badan kumanaan dhalinyaro ah oo Itoobiyaan ah oo rag iyo dumarba ah ayaa kumanaan kun oo meylal u jaray sidii ay shaqo uga heli lahaayeen kuwa saliida hodanka ku ah ee Sacuudi Carabiya halka kuwo kalena ay tageen UAE ama Qatar.
Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka oo dalalkooda ka masaafuriyay shaqaalaha Itoobiyaanka ah was last modified: April 16th, 2020 by Admin
Dhageyso:-Taakuleyn Lacag ay gaarsiiyeaan Gabdho qurbo joog ah Xarunta Cusbitaalka Degmada Baydhabo iyo Agoonta Degamada Baydhabo..
Dhageyo:-Barnaamijka Kulanka Warsan
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqasho ku tegay Xerada Balli-doogle